Laptọọpụ ultrathin kacha mma: maka ndị na-achọ ọkụ na ike
Mgbe mbụ laptọọpụ pụtara, ọ bụ eziokwu na ha dị mfe ibufe, ma ọ daberekwa n'ihe anyị na-atụnyere ha. Obi abụọ adịghị ya, ha dị mfe ịkwaga karịa kọmputa desktọpụ, n'etiti ihe ndị ọzọ n'ihi na ihe kacha mma na nke ikpeazụ bụ ịkwanye ha na tebụl ma na-ahapụ ha mgbe niile, ma ọ bụrụ na anyị atụnyere ha na laptọọpụ ugbu a, ndị ahụ bụ ihe buru ibu n'ezie. na arọ.
Ugbu a, ha dị ọkụ ma dị gịrịgịrị, na ụdị ngwá ọrụ ndị ọzọ abịawokwa: nke ultrathin laptọọpụ na obodo nwere mmasị nke ukwuu na nke anyị ga-egosi gị ụdị kachasị mma nke a na-ere taa.
1 Laptọọpụ dị fechaa kacha mma
2 Ụdị kacha mma nke laptọọpụ ultra-pato
3 Kedu ihe a na-ewere dị ka laptọọpụ ultrathin?
4 Enwere laptọọpụ dị fechaa na ọnụ ala?
5 Laptọọpụ dị gịrịgịrị nwere ike ịdị ike?
6 Laptọọpụ dị obere: echiche m
7 Ebe ị ga-azụta laptọọpụ ultrathin dị ọnụ ala
7.2 Ụlọikpe Bekee
7.4 Ihe PC
8 Kedu mgbe ịzụrụ laptọọpụ dị arọ dị ọnụ ala?
8.1 Black Friday
8.2 Ụbọchị Mbụ
8.3 Cyber ​​Monday
Laptọọpụ dị fechaa kacha mma
Sọpụrụ MagicBook X15 -...
Lenovo Yoga Slim 9 -…
KUU SBOOKM Kọmputa ...
Ụdị kacha mma nke laptọọpụ ultra-pato
ASUS bụ otu n'ime ndị na-emepụta kọmputa kasị ukwuu n'ụwa, rute ebe nke anọ n'ime afọ iri gara aga. Dị ka nke a, na katalọgụ ya anyị nwere ike ịhụ, na mgbakwunye na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị ka motherboards, graphics, peripherals, multimedia ngwaọrụ, mobiles, screens, wdg, kọmputa dị iche iche, site na ndị kasị akọ ruo ndị kasị ike, na ihe niile. na ezigbo uru maka ego-ụdị, n'echiche na, ịbụ ụdị a ma ama, ihe kachasị mfe ga-eche na ngwaọrụ ha dị oke ọnụ, ma ha adịghị.
ASUS ZenBook 14…
ASUS VivoBook S14…
N'ime katalọgụ ya nke kọmpụta anyị nwekwara ike ndị dị gịrịgịrị na, dị ka PC ndị ọzọ ọ na-arụpụta, ha so na ndị kacha mma n'ahịa. Na mgbakwunye na ịkpa àgwà ọma n'akụkụ ọ bụla, ha na-enyekarị nnwere onwe, atụmatụ na ogologo oge, yabụ anyị nwere ike ime ka obi sie gị ike na ha bụ ndị a. nzọ nzọ.
Apple na-abụkarị n'ọtụtụ ndepụta, na ọ bụ ezie na ha aghọwo ndị a ma ama n'ime afọ iri na ọkara gara aga dị ka "onye na-emepụta iPhone," ha si na ebe a na-adọba ụgbọala na-emepụta kọmputa. A na-akpọ laptọọpụ ha MacBooks, ha na-atọkwa onye ọ bụla nwere ike imeli ha obi ụtọ na ọ bụghị adabere na ngwa nke bụ naanị maka Windows ma ọ bụ sistemụ arụmọrụ ọzọ, ebe ọ bụ na MacBook na kọmputa Apple ndị ọzọ. na-arụ ọrụ na macOS.
Kọmputa Apple ...
Apple bụkwa ụlọ ọrụ ama ama maka kọmpụta ya dị obere na nke dị ọkụ, nke mere na ha na-eji aha nna nna "Ikuku" (nke sitere na "ikuku" ma ọ bụ "ìhè") n'ụfọdụ ụdị ha. Mana nke MacBook Ikuku Ha na-abụkarị otu ndị nwere enyo pere mpe karịa ee, ha na-adaba na ngalaba a, mana ha nwekwara ndị ọzọ dị ike karịa nke dịkwa gịrịgịrị ma dịkwa ọkụ, ndị ahụ bụkwa ọkacha mmasị obodo, akụkụ nwekwara n'ihi na nnwere onwe ha bụ nke ahụ. kacha mma. N'ezie, ọ bụrụ na anyị nwere ike ịkwụ ụgwọ ihe ha rịọrọ anyị maka ha.
LG bụ ụlọ ọrụ South Korea ama ama maka ikiri ya, nke mere na ha na-arụpụta ma na-ere ọtụtụ ihe nleba anya na telivishọn. Kedu ihe ọzọ, nye panel maka ọtụtụ ụdị ndị ọzọ, ụfọdụ ogwe eji na ihuenyo nke, dịka ọmụmaatụ, ngwaọrụ mmetụ. Ma na mgbakwunye na telivishọn na panel, ọ na-arụpụtakwa ọtụtụ ngwaahịa ndị ọzọ, dị ka ekwentị mkpanaaka, mbadamba na ngwa ụlọ.
Banyere kọmpụta ha, ha na-arụpụta ndị nwere àgwà dị elu nke ọ bụ naanị ụlọ ọrụ ochie ndị dị otú ahụ nwere ike inye. O kwesịghị iju anyị anya na anyị kwuru nke ahụ Ihuenyo laptop LG dị ezigbo mma, ma ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị ịhụ ka njikwa nke ogwe aka na-enye ha ohere ịbụ otu n'ime ndị mbụ na-emepụta laptọọpụ nwere ụdị nha na ụdị dị iche iche, n'etiti nke anyị nwere ụfọdụ n'ime ihe kachasị mma na-adịchaghị mkpa na ahịa.
Lenovo bụ ụlọ ọrụ China a raara nye elektrọnik n'ozuzu, na ịkọ ihe niile ị na-eme ma na-ere ga-abụ ihe siri ike na isiokwu dị ka nke a. Anyị nwere ike ikwu na ọ na-arụpụta PDA (ee, ka), ekwentị mkpanaaka, mbadamba nkume, telivishọn, mpụta na ọtụtụ ihe eletrọnịkị ndị ọzọ, n'ime nke anyị na-ahụkwa kọmputa ma ọ bụ na ha agaghị etinye na ndepụta a.
Lenovo IdeaPad Flex 5 -…
Lenovo IdeaPad 3, ...
Na katalọgụ kọmputa Lenovo anyị na-ahụ ihe niile nwere ụdị nhazi niile, nke a na-agụnye kọmpụta ultrathin dị ike, nke nwere ezigbo nhazi yana ọnụ ahịa ezi uche dị na ya, ọnụ ahịa nke nwere ike ịdaba ọbụna ma ọ bụrụ na anyị kpochapụ ihe ndị dị na ya ma ọ bụ ihe anyị na-ebute ụzọ bụ mkpa. Nke ahụ bụ, anyị nwere ike ịchọta akwụkwọ ndetu Lenovo ultra-thin dị obere yana yana imewe dị njọ naanị n'ihi na ha maara na ọ nwere ike ịmasị ndị ọrụ nwere obere akpa.
MSI bụ akara teknụzụ ozi Taiwanese nke na-echepụta, na-arụpụta ma na-ere akwụkwọ ndetu, nne na nna, eserese, kọmpụta ụlọ elu, ihe niile n'ime otu (AIO) na ngwaahịa ndị ọzọ dị ka mpụta na ihe metụtara moto egwuregwu. Ọtụtụ oge, mgbe anyị hụrụ ma ọ bụ na-agụ ihe gbasara MSI, ihe anyị nwere n'ihu anyị bụ laptọọpụ ma ọ bụ ngwa egwuregwu, na nke ahụ bụ otu n'ime ahịa ndị ọ na-apụta, na ọtụtụ.
MSI Optix MAG272CQR -...
Mana na mgbakwunye na kọmpụta ndị ahụ buru ibu, nwere atụmatụ ike na ahụigodo siri ike, MSI kwa na-arụpụta kọmpụta ndị dị gịrịgịrị, ndị ọzọ na-adịchaghị arọ ma dị mfe ibufe iji nwee ike iji n'ọnọdụ ọ bụla ma ọ bụ ebe ọ bụla.
Kedu ihe a na-ewere dị ka laptọọpụ ultrathin?
Laptọọpụ ultrathin kwesịrị inwe akụkụ na ịdị arọ nke na-abịara anyị ozugbo site na ụdị laptọọpụ ọzọ: Ultrabook. Iji nwee ike ịnweta akara Ultrabook, ọ dị mkpa iji mezuo ihe ndị a chọrọ, ma ka ọ bụrụ ultra-thin, ọ ga-ezuru oke na ibu ya. Ya mere, laptọọpụ ultrathin bụ nke nwere a ọkpụrụkpụ adịghị karịa 21mm ọ bụrụ na ihuenyo bụ 15.6 sentimita ma ọ bụ ibu ma ọ bụ 18mm ma ọ bụrụ na ihuenyo bụ 14 sentimita asatọ ma ọ bụ obere.
A bịa n'ịdị arọ, ọbụlagodi Ultrabooks enweghị ọkọlọtọ edere na ya, mana anyị maara na ọtụtụ laptọọpụ ultralight. erughị 2kg, ụfọdụ n'ime ha na-eru 1.5kg. N'ezie, Apple wepụtara MacBook nke na-erughị 2lbs, nke na-erughị 1kg, ma ọtụtụ n'ime anyị na-eche na nke a adịlarị ntakịrị n'ihi na, mgbe anyị na-arụ ọrụ na laptọọpụ anyị n'apata ụkwụ anyị, obere arọ na-eme ka ọ sie ike. dobe ya..
Mana n'ọnọdụ ọ bụla, laptọọpụ ultralight ga-eru ihe na-erughị 2kg ma bụrụ ihe na-erughị 21mm.
Enwere laptọọpụ dị fechaa na ọnụ ala?
Huawei MateBook X Pro…
Ọ bụrụ na anyị eleghachi anya azụ n'oge, anyị nwere ike icheta ihe ngwa teknụzụ dị n'oge gara aga: nnukwu, buru ibu, nke mere na ugbu a ha na-ele anya ihe ọchị. Mgbe ihe nwere atụmatụ ka mma pụtara, ngwaọrụ ahụ dị oke ọnụ, ọnụ ahịa na-abawanyewanye ka a na-ejikọta ngwaọrụ ahụ. M na-akọwa nke a maka otu ihe: obere na Inwe ihe niile dị na oghere siri ike dị oke ọnụ, nke bụ ya mere, n'ozuzu, akwụkwọ ndetu dị arọ dị oke ọnụ. Ma ihe niile?
Ozi ọma ahụ bụ asọmpi ahụ siri ike, na ọnụ ahịa na-agbanwe. Ụdị kachasị ewu ewu, dị ka Apple, ka dị oke ọnụ, mana ụlọ ọrụ apple bụ n'ihi na ọ bụ naanị ha bụ ndị na-achịkwa na ngwa ngwa, nwere ike na-agba MacOS. Ndị ọzọ na-emegbu ntakịrị na ọnụ ahịa ahụ. Tụkwasị na nke a, otu asọmpi a na-emekwa ka ụdị ndị ọzọ na-adịghị ewu ewu na-adọrọ mmasị, na maka nke a, ha na-enyekarị ihe ha obere ma ọ bụ dị ọnụ ala karịa.
Ya mere, maka ajụjụ ma enwere laptọọpụ dị arọ na ọnụ ala, azịza ya bụ ọ bụrụ na ha dị. Otu n'ime ihe atụ kachasị mma bụ CHUWI, akara nke a mụrụ na 2004 ma na-emeri Europe na North America ugbu a na laptọọpụ ya dị mma na ọnụahịa ndị siri ike ikwere, na-enweghị nkwụsị nkwado na nkwa.
Laptọọpụ dị gịrịgịrị nwere ike ịdị ike?
Ee ee nwere ike. N'ezie, na dị ka anyị kọwara n'elu, e nwere Ultrabooks, na ndị a laptọọpụ ga-egbo ihe ndị a chọrọ na ihu ọma na-esi ike dị ka ndị ọzọ thicker laptọọpụ, ma na a belatara size. Ultrabooks na-adịkarị mkpa ka a na-etinye ya na igwe ọla iji kpochapụ okpomọkụ nke processor na ihe ndị dị n'ime ya ga-esi pụta, ya mere ee, enwere kọmputa dị mkpa ma dị ike.
Ihe doro anya bụ na, ọ bụrụ na ika na-emepụta kọmputa abụọ yiri ya ma otu dị gịrịgịrị karịa nke ọzọ. Ìhè ahụ yikarịrị ka ọ dị obere ike karịa nke dị arọ Maka ihe ezi uche dị na ya: ibu ibu, ihe ndị ọzọ anyị nwere ike itinye n'ime ya, na okpomọkụ nwekwara ike gbasaa nke ọma. Mana nke a abụghị ọkọlọtọ edere na, iji mara ihe niile laptọọpụ nwere ike inye anyị, anyị ga-elele nkọwapụta nke onye nrụpụta nyere.
Laptọọpụ dị obere: echiche m
Ọ bụrụ na anyị na-ele anya naanị na ọkpụrụkpụ, ya bụ, ọ bụrụ na anyị na-ekwu banyere mkpa laptọọpụ na-adịghị eru Ultrabook, ihe anyị ga-enwe n'ihu ga-a. Enwere ike ibugharị ya na akụkụ pụrụ iche. Ya mere, ha bụ ezigbo kọmputa ma ọ bụrụ na anyị na-achọ uru maka ego na anyị kwesịrị ịkwaga ha nke ukwuu. Ihe atụ nke ihe ha nwere ike ijere anyị ozi nke ọma bụ maka ụmụ akwụkwọ ndị chọrọ kọmputa mgbe niile n'elu. Ihe atụ ọzọ nke ha ga-abụ nhọrọ dị mma ga-abụ maka ndị ọrụ na-anọghị n'otu ụlọ mgbe niile ma ọ bụ na-achọ iburu laptọọpụ ha iji jikọọ ya na TV dị ka ụlọ ọrụ mgbasa ozi.
Ha bụ nhọrọ dị mma na ikpe ndị dị n'elu, ma ha abụghị ma ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ ngwá ọrụ dị ike nke a ga-arụ ọrụ dị arọ. Ọbụlagodi na ihe anyị họọrọ erutela Ultrabook, mana nke a bụ ụdị laptọọpụ ọzọ nke na mgbakwunye, na-enwekarị ọnụahịa na-adịkarịrị ala € 1000.
Ọ bụrụ n’ịzọ n’elu ultrabook, ị ga-enwe ihe kacha mma n’ụwa abụọ a: laptọọpụ dị oke mkpa, nke dịkwa obere ma nweekwa ikike ịrụ ụdị ọrụ ọ bụla.
Ebe ị ga-azụta laptọọpụ ultrathin dị ọnụ ala
Amazon bụ ika mara tumadi maka ya online ụlọ ahịa. Ọrụ igwe ojii ha amachaghị nke ọma, nke ha na-enye ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ nnabata na ọrụ ndị ọzọ, yana n'ihi mmasị na mmepe ha metụtara ọgụgụ isi, site na ebe, n'etiti ihe ndị ọzọ, onye enyemaka ha nke ọma Alexa, onye na-emegide ya ozugbo. nke Google Assistant na Siri (Apple).
N'ime ụlọ ahịa gị anyị nwere ike ịhụ ihe niile anyị nwere ike ịchọrọ, yana fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile na ọnụahịa siri ike iti. Ihe ọ bụla anyị na-achọ, otu n'ime nhọrọ mbụ anyị ga-ele anya bụ Amazon, akụkụ ụfọdụ n'ihi na, na mgbakwunye na ọnụahịa na ezigbo ọrụ, ha na-enye nkwa dị mma. Tụkwasị na nke ahụ, Amazon bụkwa ọnụ ụzọ ebe ọtụtụ obere ụlọ ahịa ndị ọzọ na-ere. , yabụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile dị. Ọ bụrụ na ihe anyị nwere mmasị na ya bụ kọmputa ultralight, ha ga-enwe nke kachasị mma maka mkpa anyị, onye ọrụ zụrụlarị laptọọpụ abụọ na ụlọ ahịa a ma ama na-agwa gị.
Maka ndị anyị bụ ndị agadi, El Corte Inglés na-ewetara anyị ezigbo ncheta. Anyị bụ́ ndị bi n'obere obodo, anyị na-aga n'isi obodo na-echekwa dị ka nke ya na ọ dị ka ogige ntụrụndụ, ma taa ihe niile dị iche. N'ezie, El Corte Inglés agbanweela ntakịrị, n'echiche bụ na ọ ka nọ n'obodo ukwu ma na-enye ọtụtụ akụkọ, ma ha na-agbasawanye site n'inweta ndị nta na ndị nta. ụlọ ọrụ nke dị iche iche formats, nke nyere ya akụkụ ọzọ.
N'aka nke ọzọ, ha emewokwa ka ọgbara ọhụrụ, ma ugbu a nwere a ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ebe anyị nwere ike ịzụta ihe ọ bụla anyị ga-eme na ụlọ ahịa anụ ahụ gị. N'ihe gbasara ọpụrụiche ya, ejiji bụ otu n'ime ha, kamakwa ngwá electronic. Ọ bụ na nke ikpeazụ ebe anyị nwere ike ịhụ ụdị ngwa eletriki niile, ebe, n'akụkụ ụfọdụ, anyị nwere ike ịgụnye kọmputa. Ọ bụrụ na ị na-achọ laptọọpụ ultralight, na El Corte Inglés ị ga-ahụ ọtụtụ, mana ị ga-eburu n'uche ihe ọ bụla: ndị dị ala anaghị adịkarị n'ụlọ ahịa dị mkpa dị ka nke a.
Njem ịzụ ahịa nke nwata m nke m kwuru na nke gara aga kwụsịrị na Continente, nke bụ aha nke Carrefour ugbu a na-abịakwute anyị site na France mara ọtụtụ iri afọ gara aga. Laa azụ n'oge ahụ, ha bụ nnukwu hypermarkets Ha nọ naanị n'obodo ukwu, ma ugbu a, anyị nwere ike ịhụ Carrefour n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ obodo ọ bụla, ma ọ bụrụhaala na ọ nwere ọnụ ọgụgụ kacha nta nke ndị bi na ya na-aba uru maka ụlọ ọrụ ahụ.
Ka ọ dị ugbu a, na Carrefour ọ bụla, ma ọ bụ site na obere obodo ma ọ bụ obodo kachasị ukwuu, anyị nwere ike ịzụrụ ụdị ọ bụla, malite na ngwaahịa nri, na-agbaso nke ịdị ọcha nke onwe ma ọ bụ mma na njedebe na ndị ọzọ dị ka batrị. . Ọ bụ na nnukwu, ma ọ bụ na ụlọ ahịa ịntanetị gị, ebe anyị ga-ahụkwa ngwaahịa eletrọnịkị, dị ka ngwa na kọmputa. Na ngalaba ikpeazụ a, anyị ga-ahụ laptọọpụ ultrathin, na nke a, anyị ga-ahụ ụfọdụ ndị dị obi umeala na ndị nwere oke, ma mgbe niile na-eji ezigbo ego.
Ngwa PC malitere dị ka a portal pụrụ iche na ngwaahịa kọmputa na components ya mere. Ugbu a, ha ka bụ portal ahụ, mana ihe gbanwere bụ na ha na-enyekwa ngwaahịa eletrọnịkị ndị ọzọ dị ka ngwa ụlọ ma meghee ụfọdụ ụlọ ahịa anụ ahụ, yabụ na ha anaghị ere naanị n'ịntanetị.
Ihe PC Ọ na-arụ ọrụ na Spain na Portugal, na aha ahụ ọ dị mfe ịghọta ihe mere o ji dị na ndepụta a: o yikarịrị ka, ihe ọ bụla akụrụngwa kọmputa anyị na-achọ, ọ dị n'otu n'ime ụlọ ahịa ya. Na mgbakwunye, ebe katalọgụ ya pụrụ iche yana nke ukwuu, anyị nwere ike ịhụ ụdị laptops ultralight nke ụdị niile, gụnyere ndị dị ọnụ ala na ndị nwere oke nke ga-enwe ọnụ ahịa nke ọbụlagodi obere akpa nwere ike imeli.
Mediamarkt bụ nnukwu ụlọ ahịa na-abịakwute anyị site na Germany ma bụrụ pụrụ iche na ire ngwá electronic, nke gụnyere ngwa ụlọ, kọmputa na ngwa eletrọnịkị ndị ahịa. N'ụzọ bụ isi, ha dị ka hypermarkets, mana nwere nnukwu ngalaba niile lekwasịrị anya na ngwa elektrọn.
Ọ bụ ha mere ka okwu a na-akpọ "Abụghị m onye nzuzu" na-ewu ewu, nke na-ezo aka na ọ bụrụ na anyị azụta n'otu n'ime ụlọ ahịa ha, anyị ga-ama ihe n'ihi na anyị ga-akwụ obere ego n'ebe ahụ. Ma ọ bụ akụkụ nke ahịa ha bụ ime ka anyị kwenye na ha nwere ọnụ ahịa kachasị mma, ma ọ ka bụ eziokwu na, ọbụlagodi, ọ bụrụ na ha na-enye ngwaahịa ha. asọmpi ahịa.
Kedu mgbe ịzụrụ laptọọpụ dị arọ dị ọnụ ala?
Black Friday bụ ụbọchị si United States na-abịakwute anyị ma gbasaa n'ụwa niile. A na-eme ya n'ụbọchị na-esote ekele na mba North America, na ebumnuche bụ, site na ire ere. gbaa anyị ume ka anyị na-azụ ahịa ekeresimesi mbụ. N'oge "Black Friday", anyị ga-ahụ ụdị ihe niile na ọnụ ala dị ala na ụlọ ahịa ọ bụla, n'agbanyeghị ọpụrụiche ya. Obi abụọ adịghị ya, laptọọpụ na Black Friday ha na-ebelata ọnụ ahịa ha nke ukwuu.
Ụbọchị Prime bụ ụbọchị dị mkpa maka ndị ọrụ Amazon, karịsịa maka ndị anyị na-edebanye aha na ọrụ ha maka ndị ahịa nwere uru pụrụ iche. Ọ bụ ihe omume ahịa, nke na-adịkarị ụbọchị abụọ na nke Ndị ahịa adịchaghị Anyị nwere ike ịchọta puku kwuru puku ngwaahịa nwere ọnụ ala dị ala nke anyị agaghị ahụ nke a n'ime afọ ndị ọzọ. N'otu ihe omume ahụ, Amazon na-enyekwa flash deals, nke bụ nnukwu ego maka ụfọdụ ihe nwere oke ebuka. Ọ bụrụ na ị na-eche ịzụrụ laptọọpụ ultralight na ụlọ ahịa ọkacha mmasị gị bụ Amazon, ụbọchị mbụ ọ bụ ụbọchị gị… ma ọ bụrụ na ị bụ onye ahịa Prime.
Dị ka Black Friday, Cyber ​​​​Monday bụ ụbọchị ọzọ ịkpọ anyị òkù ịzụrụ ekeresimesi mbụ. Isi ihe dị iche na Black Friday bụ na a na-eme ya na Mọnde, nke na-esote Black Friday, na nke ahụ, na tiori, naanị. anyị ga-ahụ mbelata ihe metụtara eletrọnịkịN'ihi ya, ihe bụ "Cyber". Mana, ebe ọ bụ na iwu anaghị amanyere iwu, ụfọdụ azụmaahịa na-erekwa ngwaahịa anaghị eletrọnịkị na ere n'otu ụbọchị ahụ. Na iji ohere a dọtara, ụfọdụ ndị ọzọ na-esonyere Black Friday na Cyber ​​​​Monday n'ihe omume nke izu ụka dum na-agwụ na Mọnde ka anyị wee nyefee onwe anyị n'ọnwụnwa ahụ. N'iburu n'uche na Mọnde a bụ ihe kpatara ire ere na ngwaahịa eletrọnịkị, ma ọ bụrụ na ihe anyị na-achọ bụ laptọọpụ ultralight, cyber monday Ọ bụ ụbọchị anyị ga-akanye akara na kalenda.
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Tipo » Akwụkwọ ndetu dị obere